IDolby Surround Atmos iza kuza kwiApple TV 4k kuhlaziyo lwamva | Ndisuka mac
Ukungeniswa kwe-Apple TV 4k entsha kushiye abasebenzisi be-Apple benoluvo lokuba luhlaziyo oluncinci. Ngokwenyani, liqela elingakhange lifumane inkqubela phambili enkulu okoko kwaphuma isizukulwana sesi-4 (le Apple TV intsha iya kungqinelana nesizukulwana sesi-5). Ngokwezicelo, asiboni zinto zininzi zintsha, ngaphandle kohlaziyo lwazo ziboniswe ekuqaleni.
Kodwa, Le Apple TV yenzelwe icandelo elithile, abahamba bhanyabhanya. Ngokucacileyo, iApple ayinakushiyeka ngasemva, ibonelele ngomgangatho womfanekiso owamkelekileyo namhlanje kwiithelevishini eziphakathi. Ukongeza, iinkonzo ezinjengeNetflix sele zinomgangatho we-4k kwaye siza kuyibona kungekudala kwi-HBO.
Kodwa iApple ayipheleli apho, kwaye iApple TV entsha ebonisa iprosesa ye-A10x, ekuvumela ukuba ujonge imifanekiso xa kuthelekiswa imibala I-HDR kunye neDolby Surround Atmos.
Ngokumalunga nomsebenzi Iatmos: ivumela izithethi ukuba zilingise izandi kwindawo ye3D, endaweni yokupompa iaudiyo ngaphandle kumajelo ahlukeneyo. Ke ngoko, okoko nje sinezithethi ezisemgangathweni, siyakonwabela imovie enomgangatho ofanayo wesandi njengemidlalo yeqonga esofeni ekhaya. Nangona kunjalo, ukonwabela olu hlobo lwesandi, kufuneka silinde.
Ngokwencoko ka-Apple neli phephancwadi esengozini, entsha Apple TV 4k, inehardware eyaneleyo yalo msebenzi, kodwa isoftware ayikakulungeli, kwaye iza kuza nohlaziyo lwesoftwe kamva. Nje ukuba sibe nalo msebenzi, siya kuba nomxholo wethu osuka kwiNetflix kunye namanye amaqonga, arekhodwe ngomsindo ojikeleze le ndawo.
Kwaye umsebenzi wokugqibela ongakhange ubonwe kwaye ukuza kuthi ga ngoku ufumaneka kuphela kwi-Apple TV ngokunxulumene nokhuphiswano lwayo, ngu Umbono weDolby. Yindaleko yemifanekiso ye-HDR, ekwaziyo ukuvelisa kwakhona i-HDR10.
Siyathemba ukuba uhlaziyo aluyi kulibaziseka kwaye sinokufumana uninzi kumgangatho weethelevishini zethu ngeApple TV 4k entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IDolby Surround Atmos iza kwiApple TV 4k kuhlaziyo lwamva
Uhlaselo lweHacker usebenzisa i-iPhone yam yokutshixa iMac kwaye ucele intlawulelo
IPodcast 9x03: IOS 11 ilapha